मदन पुरस्कारको गरिमा थाम्न सकिन्न कि भन्ने डर छ : चन्द्रप्रकाश बानियाँ « Naya Page
इतिहासका जानकार तथा लेखक चन्द्रप्रकाश बानियाँले तत्कालीन पर्वत राज्यको विषयवस्तुलाई आधार बनाएर लेखेको ‘महारानी’ उपन्यासले २०७६ सालको मदन पुरस्कार प्राप्त गरेपछि अहिले साहित्यकार बानियाँको चर्चा चुलिएको छ । बानियाँले यसअघि ‘ऐतिहासिक पर्वत राज्य’, ‘खस जाति र कूलपूजा’ र ‘मृत्यु संस्कार मन्थन’ गरी तीन कृति प्रकाशित गरिसकेका छन् । उपन्यास लेख्दाको पृष्ठभूमि, मदन पुरस्कार प्राप्त गरेपछिको अनुभूति र आगामी योजनाका बारेमा गरिएको अन्तर्वार्ताको अंश :
२०७६ सालको मदन पुरस्कार तपाईको उपन्यास ‘महारानी’ ले प्राप्त गरेकोमा हार्दिक बधाई । देशकै प्रतिष्ठित पुरस्कार पाउँदा कस्तो अनुभूति गर्नु भएको छ ?
प्राप्ति आफैमा सुखकारक विषय हो । त्यसमा पनि अनपेक्षित उपलब्धि हासिल हुनु थप आनन्दको विषय हुने नै भो तर मलाई भने उपलब्धिभन्दा मदन पुरस्कारको गरिमा थाम्न सकिन्न कि भन्ने डर लागिरहेको छ ।
लेख्ने कोशिस त गर्दै आएको छु । भविष्यमा पनि प्रयत्न निरन्तर रहने छ तर आफ्नै लेखनशील्पसँग सन्तुष्ट हुन सकिएको छैन । मेरो भावना र मेरो जानकारीको संयोजन गरेर सुन्दर रचना गर्न मेरो कलमले सक्तैन । मेरो त्यही अनुभूतिले मदन पुरस्कार प्राप्त लेखकको गरिमा गौरव थाम्न सकिन्न कि भन्ने लाग्ने हो । त्यसमाथि थप म अलि अल्छी पनि छु । घुमफिर गर्न रुच्दैन । अन्तरक्रिया र संवाद गर्ने बानी पनि छैन ।
उपन्यासमा कलम यसअघि पनि चलाउने कोशिस गर्थे । दुर्घटनावश ती लेखोट पाठकका हातसम्म पुग्ने अवसर नपाइकनै मृत्युवरण गर्ने दुर्नियतिको शिकार भए । जहाँसम्म पर्वतको इतिहासलाई विषय बनाउनुको कारण के थियो भन्ने प्रश्न हो त्यससँग मेरो निजी भावना पनि गाँसिएको छ । चौबीसे राज्य पर्वतको समाजमा ‘आठ हजारका राजा, बाह्र हजारका बानियाँ’ भन्ने लोक कथन जीवित छ । त्यो भनेको तत्कालीन मल्ल राजवंशले आर्जन गरेको आठ हजारमा बानियाँको पाखुरीले १२ हजार घरधुरी थपेको भन्ने अर्थ लाग्छ ।
अर्थात् तत्कालीन पर्वत राज्यको निर्माणमा मेरा पुर्खाको रगत पसिना भिजेको थियो । दुर्भाग्यवश पवर्तको त्यो इतिहास लेखिएन । पर्वत राज्यको अस्तित्व मेटिए पनि म त्यही माटोमा जन्मे हुर्केको मान्छे हुँ । पुर्खाको त्यो माटो, त्यो इतिहासप्रति मेरो मनमा अगाध श्रद्धा र गौरव छ । त्यसैैले त्यही इतिहास उधिन्नका लागि पनि विषय चुनिएको हो । अर्को कुरा तथ्य प्रमाणले पुष्टि गर्न नसकिने लोक कथनमा बाँचेको इतिहास लिपिबद्ध गर्ने समाज समक्ष गरेको वाचा पूरा गर्न पनि यो विषय रोजेको हुँ । अर्थात् यो लेखन आवश्यकताको उपज हो ।
उपन्यासमा आन्तरिक सत्ता सङ्घर्ष, अरन्तरदेशीय षड्यन्त्र, द्वन्द्व र त्यसैमा घुनझैं पिसिएकी राजकुमारीको कथा छ । उपन्यासमा परेका ती घटनावली सत्य हुन् ?
माथि नै भनिसकेको छु कि समाजमा लोककथनका रूपमा बाँचेको कथा गाथाहरु ऐतिहासिक घटना नै हुन् । समयक्रममा सत्य कुरा कुना पर्दै गयो र त्यसमा अनेक नयाँ फूलबुट्टा थपिए, भरिए । सत्य इतिहास भ्रमपूर्ण कथाको छाँयामा विलुप्त भयो । ‘महारानी’ उपन्यासले त्यही भ्रमको थुप्रोबाट इतिहास उधिनेर बाहिर निकाल्ने कोशिस गरेको हो । त्यसैले उपन्यासको प्रारम्भमै यो ‘इतिहास पुनर्लेखनको प्रयत्न हो’ भनिएको हो ।
उपन्यासमा वर्णित घटना जस्तो अपेक्षाकृत कम उमेरकी विश्वप्रभामा रहेको असाधारण त्यागको भावना, घनश्याममा रहेको न्यायप्रियता र सुमन्तको विज्ञता जस्ता विषयहरु पाठकका लागि अलिक अस्वाभाविक लाग्लान् कि भन्ने लागेन ?
‘महारानी’ उपन्यास लेखिएपछि पर्वत राज्यको कथा समाप्त भयो कि त्यसको ‘सिक्वेल’ पनि रचना गर्ने आवश्यकता देख्नु भएको छ ?
ऐतिहासिक घटनावलीलाई उपन्यासको कथानकमा ढाल्न र समेट्न कत्तिको सजिलो वा अप्ठेरो अनुभव गर्नु भएको छ ?
लेख्नु सजिलो कुरा होइन । कमसेकम मलाई त्यस्तो लाग्दैन । जहाँसम्म ऐतिहासिक उपन्यास लेख्नु सामाजिक विषयवस्तुको उपन्यास लेख्नु जस्तो सजिलो कुरा होइन । घटना, समय, पात्र, विषयवस्तुको निश्चित घेरा र सीमा हुन्छ । निश्चिन्त भएर कल्पनामा मुक्त कलम चलाउन पाइँदैन । सामाजिक उपन्यास घरमै बसेर कल्पना गर्न सकिन्छ । ऐतिहासिक उपन्यासका लागि तथ्यको पनि ख्याल राख्नुपर्ने हुन्छ । सत्यको अन्वेषण अनिवार्य पाटो मानिन्छ ।
पहिलो कुरा तत्कालीन खस भाषिकाको खोज गर्नुपर्ने आवश्यकता थियो । पर्वत राज्यकालका सीमित लेखोट उपलब्ध छन् । कैयौं लेखोट ‘डिकोट’ गरिदिने विज्ञको आवश्यकता पर्छ । पाँच सय वर्षको लामो अवधिमा लेखिएका दुई दर्जनभन्दा बढी लेखोटबाट भाषाको नमूना निकाल्नु निकै गाह्रो काम हो । किनकि भाषा निरन्तर विकासशील हुन्छ, परिविर्तनशील हुन्छ । पाँच सय वर्षमा त भाषामा आनको तान फरक परिसक्छ । दुई सय वर्षमै भानुभक्तको रामायणमा प्रयुक्त भएको भाषीका पूर्णरूपमा विलोप भएको उदाहरण हाम्रा सामु साक्षी छ ।
अवश्य । मदन पुरस्कारले मलाई थप घोटाउने नै भो जस्तो लागेको छ । मैले बुताले भ्याएसम्म लेख्ने छु । लेख्नै पर्छ । मेरो लेखन विषयको प्राथमिकतामा भने आफ्नै जन्मभूमि, आफ्नै माटो, आफ्नै समाज र आफ्नै इतिहास हुनेछ । मेरो समाजसँग गाँसिएका दुई–चार वटा कथाहरु मेरो मनभित्र खेलिरहेका छन् । तीमध्ये प्राथमकिता कुन विषयलाई दिने भनेर निर्णय भने गरिसकेको छैन ।
‘महारानी’ को प्रकाशनपछि पाठक प्रतिक्रिया कस्तो पाउनु भएको छ ? स्वाभाविकरुपमा अभिव्यक्त हुने सकारात्मक नकारात्मक पाठक प्रतिक्रियाले कस्तो अनुभूति गराउँदो रहेछ ?